စက်တင်ဘာ ၂၅ ဖို့ဝိန်းမြို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပမည် | MoeMaKa Burmese News & Media
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ စက်တင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၂
လက်ခံရရှိသော သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ လာမည့် စက်တင်ဘာ ၂၅၊ အင်္ဂါနေ့၊ ဖို့ဝိန်းမြို့၊ Allen County War Memorial Coliseum မှာ မနက် ၉ နာရီက ၁၀နာရီ ၄၅ အထိ လူထုတွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဆက်သွယ်ရန်မှာ ဦးကုသလ နှင့် ဦးထွန်းဦးတို့ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ပြန်ချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
The Burmese community of Fort Wayne and Indiana-Purdue University of Fort Wayne are the main sponsors of Daw Aung San Suu Kyi’s public appearance in Fort Wayne. The public speech is an opportunity for the citizens of Fort Wayne and the world to hear her inspiring message of democracy and liberty. This historic event is free of charge and she will answer some questions from the public. We invite everyone who will consider taking part in this exciting event; the event opens to the public on the following date.
9:00 am to 10:45am
Daw Aung San Suu Kyi Welcoming Committee (Burmese Community, Fort Wayne)
Media Contact: Daw Aung San Suu Kyi Welcoming Committee (Burmese Community, Fort Wayne)
Ven Kuthala: Tel: 260-580-2133 Email: ubazin@gmail.com,
U Tun Oo: Tel: 260-418-3024 Email: nldburma@hotmail.com